မယ်သံ: October 2011
Posted by Thandar Lwin at Tuesday, October 11, 2011 8 comments:
(၁)ချမ်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့ ရုပ်ကဆိုးနေတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ? ။
(၂)ချမ်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့ကိုယ့်သားသမီး တပည့်လက်အောက်ငယ်သားတွေကို ပြောမနိုင်ဆိုမနိုင် ဖြစ်နေရတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ? ။
(၃)ချမ်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့ လိုတာမရ ရတာမလို ဖြစ်နေရတာ (ငွေပေးဝယ်လို့မရတာ) ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ? ။
(၄)ချမ်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့ ကောင်းတာတွေနဲ့ မတဲ့တာ (သွေးတိုးရှိလို့၊ ဆီးချိုရှိလို့ ဟိုဟာမတဲ့၊ ဒီဟာမတဲ့ ဖြစ်ရတာ) ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ? ။
(၅)ချမ်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့ ရန်သူမျိုး ငါးပါးရန်က မလွတ်ကင်းတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ? ။
8:47 AM Author: Dhamma Yanant (http://dhammayanantmm.blogspot.com/2010/01/blog-post.html)
Posted by Thandar Lwin at Monday, October 10, 20115comments:
Posted by Thandar Lwin at Sunday, October 09, 2011 1 comment:
Posted by Thandar Lwin at Wednesday, October 05, 20115comments: